"Le Petit" (istudiyo esinekhitshi) - I-Airbnb
"Le Petit" (istudiyo esinekhitshi)
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uFabiola iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Isitudiyo esihle esizimeleyo kumgangatho ophezulu we "Palazzo Uzielli" kumbindi wedolophu yaseLivorno enombono ongaphakathi ozolileyo. Indawo yokuhlala ivumela iindwendwe ukuba zonwabele ukuzimela ngokupheleleyo: iholo yokungena, igumbi lokuhlambela elineshawari, igumbi lokuhlala elinesofa ephindwe kabini (ibhedi esele ilungile), ikhitshi, ifriji, ioveni yemicrowave kunye nezixhobo. Ixhotyiswe ngekhitshi, ibhedi kunye nelinen yokuhlambela, iTV, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina encinci kunye nomoya oshushu / obandayo.
Indawo yokuhlala ixhotyiswe nge-lift, ukuze yenziwe i-flight of stairs.
Ukuze kuhlawulwe ekuhlaleni irhafu yabakhenkethi 1.70 euro umntu ngamnye ngenxa yokuqala 4 ubusuku, irisithi rhoqo iya kukhutshwa.
Oku kulandelayo kukhululwe ekuhlawuleni irhafu yabakhenkethi:
a) abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesine;
b) abo kufuneka benze unyango kwizibonelelo zempilo ezikummandla kamasipala kunye nomntu onokuba liqabane lakhe;
c) abo bancedisa izigulane ezilaliswayo ezingeniswe kwizibonelelo zempilo ezikummandla kamasipala ngexabiso leqabane elinye kwisigulana ngasinye;
d) abazali, okanye abongi abathunyiweyo, abancedisa abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo, abalaliswe esibhedlele kumaziko ezempilo kummandla kamasipala, abantu ababini ubuninzi kwisigulane ngasinye;
e) abantu abangakwaziyo ukuzimela, abaneziqinisekiso zonyango ezifanelekileyo, kunye neqabane labo;
f) abaqhubi beebhasi kunye neenkokeli zabakhenkethi ezibonelela ngoncedo kumaqela aququzelelwe zii-arhente zohambo nokhenketho. Uxolelo lusebenza kumqhubi webhasi ngamnye kunye nomntu omnye okhaphayo ngabathathi-nxaxheba abangamashumi amabini anesihlanu;
g) abo bangahlali kuMasipala waseLivorno, basebenza nakweyiphi indawo yokuhlala ekubhekiswa kuyo kubugcisa. 2;
h) abo bahlala kumaziko okuhlala ngenxa yemiqathango eyamkelwe ngoorhulumente, ukujongana neemeko zonxunguphalo ezibangelwa ziintlekele okanye iziganeko ezingaqhelekanga okanye ngeenjongo zoncedo loluntu;
i) amalungu amapolisa, imikhosi karhulumente kunye neyengingqi okanye imibutho, kunye nequmrhu lesizwe labacimi-mlilo kunye nokhuseleko loluntu abahlala kwiimfuno zenkonzo ekhethekileyo kwaye banqunyelwe ixesha elifanayo.
Ukhululo ekubhekiselwe kulo kumanqaku b), c), d), e), f) kunye ne) luxhomekeke kunikezelo-ntetho, ngumntu onomdla, kumphathi wendawo yokulala okanye kumntu okhankanywe kumhlathi 3. of article 4 mmiselo, nojonge-declaration ethile, ekhutshwe kulandelwa kwaye ngokweenjongo amanqaku 46 no-47 ka-kaMongameli Ndiwise 445/2000. Izibhengezo ezikhutshwe ngumthengi zokuxolelwa kufuneka zigcinwe iminyaka emihlanu
"Le Petit" ise kumbindi wesixeko 50m ukusuka kwenye lwezikweri eziphambili "Piazza Cavour", apho kukho zokumisa iibhasi ukufikelela kwisikhululo sikaloliwe kunye nezinye kwizithili Livorno kwaye zihoyi i misele iimpawu "mna Medici" Livorno.
Vala esandleni zonke iinkonzo kunye neevenkile ze Livorno kunye kwimarike imbali ezigqunyiweyo "delle Vettovaglie" nawo ngaphakathi kwindawo enebala ezinomtsalane eziphambili Livorno: i elibheke, i Mascagni Terrace ezintle, aquarium, Naval Academy, i Azimut Benetti Indawo yeenqanawa kwindlu yeModigliani, iGolden theatre, isithili "seVenice", iNqaba eNtsha njl.
Indawo yokuhlala ibekwe ngaphantsi kweekhilomitha ukusuka ekuqaliseni iCorsica, iSicily, iSardinia kunye neziqithi zeTuscan archipelago (Elba, Capraia, Gorgona).
Isikhululo seenqwelomoya saseGalilei sasePisa siyimizuzu engama-20, Lucca 40 min, Florence 1 iyure kunye 20 min, Volterra 1 iyure enesiqingatha, San Gimignano 1 iyure enesiqingatha, Siena 2 iiyure.
Inombolo yomthetho: LI003912